Indlela uCatherine Catherine ayishintshile ngayo: ngaphambi kokuhlinzwa kokuhlinzwa kweplastiki
Izwe lebhizinisi lesiboniso libhekene ne-boom langempela ekuhlinzekeni kwepulasitiki. Izici zobuciko obuhle kakhulu ezihlelwe ezizindeni zanamuhla zobuhle. Isibonelo, ngaphezu kokwandisa izindebe nokulungisa impumuzo yenye yezinsizakalo ezithandwayo kakhulu ukukhishwa kwezinhlamvu ze-Bish . Ukungenelela kokusebenza kusetshenziswe ngisho nalabo abangayidingi ngempela. Ngakho-ke, esinye sezihloko ezishisayo kakhulu zokuphikisana kwakuwukubukeka okusha kukaCatherine Barnab - izinkanyezi zombukiso othi "UComedy Woman".
Izithombe zikaCatherine Varnava ngaphambi kokuhlinzwa kwepulasitiki
Ukubukeka kuka-Ekaterina bekulokhu kukhanya futhi kukhanye. Intombazane ende kakhulu enezici ezivelele yakhanga ukunakekelwa kusukela ngesikhathi ehlanganyela kwi-KVN emaqenjini ethi "Izimfihlo Zami" (2003) ne "Ithimba Likazwelonke Lamazwe Amancane" (2004-2007).
Ngezindlela eziningi, ngenxa yokubukeka okumangalisayo komsebenzi womculi, washesha wakhuphuka. Kusukela ukubonakala kweprojekthi ethi "Comedy Woman" mayelana noCatherine waqala ukukhuluma ngephupho lamadoda.
Phakathi nalesi sikhathi, ukubukeka kwakhe kungakapheli ushintsho olukhulu. Inkanyezi ilahlekelwe isisindo, isebenze esithombeni, kodwa ayikho imidwebo ecacile yokungenelela kokuhlinzwa ebusweni bakhe. Ukwandisa i-Lip yiyona nto kuphela engumdlali we-actress. Kodwa-ke, akazange azifihle ukuthi wenza izijovo.
Ngonyaka ka-2010, uBarnaba wabe eseyingxenye yokudubula kwesithombe se-Maxim, futhi eminyakeni emibili nayo i-XXL.
Uma ubheka izithombe, bambalwa abantu abangacabanga ukuthi umdlali wesifazane akajabuli ukubukeka kwakhe futhi ufuna ukushintsha okuthile. Isikhathini esithile, inkanyezi ayizange ihlole ngempela izithombe. Kodwa ayizange ihlale isikhathi eside.
Isithombe nguCatherine Barnas ngemuva kwamaplastiki
Izinguquko zokuqala eziphawulekayo ekubukeni kukaCatherine kwenzeka ngo-2015. UBarnaba walahlekelwa isisindo ngokwengeziwe futhi, njengoba abalandeli bakhe bacabanga, bawela ngaphansi kommese wokuhlinza ukushintsha isimo sobuso.
Isithombe sikhombisa ukuthi ama-cheekbones aqala ukuchaza, futhi izihlathi zaba yize. Kungenzeka ukuthi lokhu kutholakala ngenxa yokususwa kwezingqimba ze-Bish. Ngaphezu kwalokho, abalandeli banakekele inkemba yenkanyezi. Le ngxenye ebusweni bukaCatherine ihlale ivelele kakhulu, yingakho ejwayele ukuhlekwa ngendaba ngalesi sihloko ngisho nasesibonisweni esithi "UComedy Woman". Uma uqhathanisa izithombe ezimbili zezikhathi ezahlukene, i-rhinoplasty iba sobala.
Ngokusho abalandeli bezinkanyezi, uBarnaba wasebenzisa i-blepharoplasty. U-Ekaterina wayesenamehlo amakhulu amakhulu. Kodwa isithombe sibonisa ukuthi ukubukeka sekuvule kakhulu. Kungenzeka ukuthi lokhu kungumphumela wokuqinisa amajwabu angaphezulu aphansi.
Njengoba u-Ekaterina Barnaba ubheka namuhla: isithombe
Ngo-2017 uBarnaba washintsha kakhulu isithombe sakhe. Kusukela ku-brunette ovuthayo, umculi ophenduke waba yi-blonde ngamehlo aluhlaza okwesibhakabhaka.
Ezingxenyeni zokugcina uCatherine ubheka ngisho nokunciphisa. Kungabonakala ukuthi usebenzisa izinsiza ze-cosmetologists futhi isekela imiphumela yokuhlinzwa kweplastiki. Umlingisi ngokwakhe akavumeli ukuthi ulungisa ukubonakala kwakhe nge-scalpel.
Ukuguqulwa kukaBarnaba kuye kwabangela ukuphawula okuningi ekuxhumaneni nomphakathi. Ukugxeka okujulile kwakuncike ekutheni, okwakubonisa izici. Abanye abalandeli ngokuvamile bayeka ukubuka inkanyezi bese beyiqhathanisa nomculi uSvetlana Loboda.
Abameli bebhizinisi lokubonisa babhekana kakhulu. Ngakho-ke, ababhalisile bakaBarnaba bahlukaniswa ngamakamu amabili: abanye bamlahla ngokucacile umfanekiso wakhe omusha, abanye bayaqiniseka ukuthi waqala ukubheka kangcono. Futhi ucabanga kanjani?
Mangaki amanoveli uMaxim Galkin abe nawo (Pugachev akabala)
Iqiniso lonke mayelana nokuphila komuntu we-actor Maxim Averin
Isimo sezulu se-Anapa ngo-Ephreli 2017 kusuka ku-Hydrometeorological Centre
Intambo ebomvu esihlakaleni - kusho ukuthini?
Izithombe ezimnandi: izandla zemifino nezithelo zesikole kanye ne-enkulisa
Umkhuba wensimbi egazini lomntwana
Ukuthuthukiswa Kwabantwana: Ukufunda Ukukhuluma
I-Horoscope ngoNovemba 2017 - owesifazane-ingonyama - evela kuTamara Globa no-Angela Pearl
Ukuvakashela inganekwane: Kwenzekani ebusweni bukaTatiana Vedeneeva (isithombe ngaphambi nangemva kwama-plastiki)
Indlela yokukhetha izimonyo ezifanele ebusweni
Ungakhetha kanjani umuthi kaKhisimusi wokufakelwa?
Casserole kusuka ku-courgettes
Umntwana unomzwelo futhi uvame ukumomotheka
Shintsha ingaphakathi ngezandla zakho
Isabelomali somndeni, ukwakheka kwayo nezindlela zokwandisa
Ikhalenda Lunar of houseplants 2016. Izinsuku ezithandekayo nezingalungile
UPolina Gagarina uphendule ngokuqinile imibuzo ngokukhulelwa kwakhe